Global Voices teny Malagasy · 24 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 24 Oktobra 2018
Nisy ny fizarana T-shirt tamin'ny fanandramana ny tranonkalanay
Mediam-bahoaka 24 Oktobra 2018
Nanampy anay tamin'ny andrana fampiasana ny tranonkalay vaovao sy tranainy ny mpianatra avy ao amin'ny Oniversiten'i Washington.
Amerika Latina 24 Oktobra 2018
Afrika Mainty 24 Oktobra 2018
Fandaharanasa avy amin'ny fanjakan'i Shily ny BiblioRedes, izay manome fidirana maimaim-poana amin'ny solosaina sy aterineto ho an'ny tranomboky miisa 387 manerana ny firenena. Manome fahafahana manokana ho an'ireo Shiliana any amin'ny faritra tsy dia voasolo tena loatra mba hianatra ny fomba fampiasana solosaina sy aterineto ity fahafahana miditra aterineto ity. Singa iray mamaritra ity fampiofanana ity ny fahafahan'izy ireo manokatra ny tranonkalany manokana. Afaka jerena ao amin'ny blaogin'ilay tetikasa Contenidos Locales (Vontoaty Eny An-toerana) ny tena mahaliana amin'ity vontoaty ity.